Windows7driver download links | နေမင်း ( နည်းပညာ )
February 28, 2011 — naymin99
ကျွန်တော် အသုံးဝင်မဲ့ Windows7Drivers Download links လေးတွေကိုတွေ့ လို့ပြန်၇ှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်
လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ လိုအပ်မယ့် Hardware Drivers တွေကိုရှာဖွေဖို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကူညီနိုင် လိမ့် မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်မိပါတယ်။
1. ASUS Drivers (Motherboards)
ASUS ဟာဆိုရင် သူ့ရဲ့ motherboard အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်တဲ့ AMD, Intel Socket 775 နဲ့ Intel Socket 1366 တွေ အပါအဝင် တစ်ခြား motherboard အမျိုးအစားများစွာအတွက် Windows7drivers တွေကို ထုတ်ပေးနေပါပြီ။ ကျွန်တော် သူ့ဆီ သွားကြည့်တော့ သူ့ motherboards တွေ အားလုံးနီးပါးအတွက် Windows732-bit ရော 64-bit versions ရော အတွက်ပါ drivers တွေပေးထားတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ASUS ကနေပြီး servers တွေ workstations တွေ notebooks တွေနဲ့ တစ်ခြား ကွန်ပြူတာ ပစ္စည်း မျိုးစုံ ထုတ်လုပ်ပေမယ့် အားလုံးထဲမှာ လူသိများတာကတော့ motherboards တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Motherboard မဟုတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်ခြား ASUS Product တွေ အတွက်လည်း Windows7drivers တွေကို သူ့ရဲ့ websites တွေမှာ သွားရောက် ရယူနိုင်ပါတယ်။
2. Acer Drivers (Desktops and Notebooks)
Acer desktops တွေနဲ့ notebooks တွေအတွက် Windows7drivers တွေကို Acer ရဲ့ Service နဲ့ Support ပေးတဲ့ site တွေကနေ တစ်ဆင့် ရှာဖွေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ Acer က သူရဲ့ PCs နဲ့ laptops တွေအတွက် Windows7drivers တွေကို မိမိစိတ်ကြိုက် install လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ထုတ်ပေးထားတယ် ဆိုပေမယ့် သူရဲ့ Hardware တော်တော်များများဟာ Windows7ကို install လုပ်ဆောင်လိုက်တာနဲ့ default drivers တွေအနေနဲ့ installed လုပ်ဆောင်ပြီးသား ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3. Compaq Drivers (Desktops and Laptops)
တကယ်လို့များ Compaq computers တွေအတွက် Windows7drivers တွေလိုအပ်လာပြီ ဆိုရင် အဲ့ဒီ့ Drivers တွေကို HP’s standard support site ကနေတဆင့် Download ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Compaq ဟာ အခုဆိုရင် HP ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ။ Compaq ရဲ့ နောက်ထုတ် computers အသစ်တွေဟာ Windows7installed လုပ်ဆောင်ပြီးသား အနေနဲ့ ပါရှိလာတတ်ပြီး Windows7Drivers တွေလည်း ပါရှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ HP ရဲ့ site မှာ အရင်က ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Compaq computers အဟောင်းတွေ အတွက်လည်း Windows7drivers တွေရှိနေပါတယ်။
AMD/ATI ကနေလာတဲ့ Windows7driver တွေမှာ ATI Radeon display driver, ATI WDM driver နဲ့ Catalyst Control Center တွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။
5. BIOSTAR Drivers (Motherboards)
BIOSTAR ရဲ့ motherboards တွေဟာ Microsoft ရဲ့ WHQL test ကို pass ဖြစ်ပြီး socket 1366, 1156, 775, AM3, နဲ့ AM2+ designs တွေ ပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ်။
Creative ဟာ X-Fi, Sound Blaster Live, Audigy, စတဲ့ သူရဲ့ နာမည်ကျော်ကြား လူသိများတဲ့ Sound Blaster products တွေ အတွက် Windows7drivers တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Creative ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ တစ်ချို့ Windows7drivers တွေကတော့ Beta အဆင့်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ တစ်ခု သတိထားသင့်တာက Beta လို့ ဖော်ပြထားတဲ့ သူ့ရဲ့ drivers တွေဆိုတာ အမြဲတမ်း ပုံမှန်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ဆောင်နေနိုင်မယ်လို့ သေချာ ပြောလို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် final versions ထွက်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ အမြန်ဆုံး Update ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ Beta versions ဆိုတဲ့ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းနဲ့ စိမ်းနေသေးသူများ အတွက် ဒီနေရာမှာ သူ့ရဲ့ သဘောတရားကို ကျွန်တော် ဖော်ပြထားတာ ရှိပါတယ်။
7. Dell Drivers (Desktops and Laptops)
Dell desktop နဲ့ laptop computers တွေအတွက် Windows7drivers တွေကို Dell ရဲ့ support site ကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
eMachines desktop သို့မဟုတ် notebook computers တွေအတွက် လိုအပ်မယ့် Windows7drivers တွေကို eMachine ရဲ့ support site ကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Gateway desktops နဲ့ notebook တွေအတွက် လိုအပ်မယ့် Windows7drivers တွေကို Gateway ရဲ့ support site ကနေ Download ရယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
HP desktop, laptop, and tablet computers တွေအတွက် Windows7drivers တွေကို HP ရဲ့ standard support site ကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ HP ရဲ့ desktop နဲ့ laptop PCs တွေအတွက် Windows7drivers တွေဆိုတာကတော့ ဟိုးကတည်းကိုက ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာစရာမလိုတာပါ။
HP printers နဲ့ scanners တွေအတွက် Windows7drivers တွေရဲ့ နောက်ဆုံး သတင်းတွေကို သူ့ဆိုဒ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Windows7Driver Information တွေကနေ သိရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ HP Deskjet, Officejet, Photosmart, LaserJet, Designjet, နဲ့ Scanjet imaging device တွေအတွက် Windows7driver information တွေကိုလည်း အတူတကွ တွေ့မြင်နိုင် ပါတယ်။
Intel motherboards တွေအတွက် Windows7drivers တွေကို intel ရဲ့ Microsoft Windows7စာမျက်နှာကနေ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ သူ့ စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ lists ထဲက များပြားလှတဲ့ motherboards အမျိုးအစားတွေဟာ WHQL test ကို passed ဖြစ်ပြီး Windows7အတွက် drivers တွေလည်း ရှိနေပါပြီ။
ဒီ Windows7drivers တွေကို download ရယူမယ်ဆိုရင်တော့ 32-bit ရော 64-bit driver versions ( ၂ ) မျိုးလုံးကို Windows7အတွက် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Lenovo desktop နဲ့ laptop computers တွေအတွက် Windows7drivers တွေကို ဖော်ပြပါ Lenovo ရဲ့ support site ကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ Lenovo ဟာ သူ့ရဲ့ ကွန်ပြူတာတွေ အတွက် Windows7information နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူရဲ့ Website စာမျက်နှာမှာ ရှာဖွေရ လွယ်ကူအောင် ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
Microsoft ဟာ OS တစ်ခုတည်း ထုတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး – သူ နောက်ထပ် ထုတ်တဲ့ Hardware တွေရှိပါသေးတယ် ဥပမာ ပြောရရင် keyboards, mice, game controllers, webcams, စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft ဟာ သူထုတ်လုပ်ထားတဲ့ hardware products တွေရဲ့ Windows7drivers တွေကို သူ့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Microsoft Hardware Support စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Microsoft hardware တွေရဲ့ Up to date ဖြစ်တဲ့ Windows7drivers တွေဟာ လတ်တလော အခြေအနေမှာ beta အဆင့်မှာပဲ ရှိသေးတာ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် Drivers တွေကို up to date ဖြစ်အောင် လုပ်ရင်းနဲ့ beta drivers နဲ့ တိုးပြီး ပြဿနာ ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ သတိထားပြီး အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။ Final versions ရပြီ ဆိုတာနဲ့ Beta မှာ ရပ်မနေပဲ ပြောင်းပြီး သုံးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပေးပါ။
နောက်ဆုံးထွက် NVIDIA GeForce/ION Windows7driver ရဲ့ version ဟာ 195.55 (Released 2009-11-17) ဖြစ်ပြီး ဒီ Windows7driver ဟာ NVIDIA GeForce 6, 7, 8, 9, 100, – 200 series desktop GPUs တွေနဲ့ ION desktop GPUs အမျိုးအစား အားလုံးနဲ့ compatible ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုရန်: ခုဖော်ပြထားတဲ့ link က Windows732-bit driver အတွက် ဖြစ်ပြီး 64-bit version အတွက် Windows7driver ကိုလည်း NVIDIA website မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးထွက် NVIDIA 3D Vision Windows7driver ရဲ့ version ဟာ 195.55 Beta (Released 2009-11-18) ဖြစ်ပြီး အဲဒီ့ Windows7driver မှာ 32-bit နဲ့ 64-bit versions နှစ်မျိုးလုံး ပါဝင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးထွက် Realtek High Definition Windows7driver ရဲ့ version ဟာ R2.49 (Released 2010/6/11) ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီ့ Download ထဲမှာ Windows7driver 32-bit နဲ့ 64-bit versions နှစ်မျိုးလုံး ပါဝင်ပါတယ်။
Sony desktop နဲ့ notebook computers တွေအတွက် Windows7drivers တွေကို Sony ရဲ့ Support site မှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Toshiba laptops computers တွေအတွက် Windows7drivers တွေကို Toshiba ရဲ့ standard support site မှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted in Drivers. LeaveaComment »
AnvSoft_Photo_Flash_Maker_Professional_5.30 + keygen »